स्वास्थ्य – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता फेरि पनि मानिसहरुमा मनोवैज्ञानिक तनाव बढेर गएको छ । कोभिड – १९ महामारीको समय सबैको लागि तनावपूर्ण समय हो । विपत्तिको बेला सामान्य डर , चिन्ता , बेचैनी , छटपटी र तनाव हुनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अवस्थामा मानिसहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रतिक्रिया नै मानिन्छ । कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला मानसिक तनावका विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन् । तर केही समयपछि धेरै जसोमा तनावका यस्ता लक्षणहरू बिस्तारै आफै कम भएर जान्छन् । तर केहीमा भने मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम बढेर जान्छ । तनावको बेला देखिने लक्षणहरू : मनमा कुरा खेल्नु, झर्को लाग्नु , रिस उठ्नु , हातखुट्टा वा जिउ काँप्नु, कट् कट् खानु वा झमझमाउनु, शरीर सिरिङ्ग हुनु, मुख सुक्नु, पसिना आउनु, टाउको- पेट दुख्नु, घाँटी वा ढाड दुख्नु, रिगंटा लाग्नु, मुटुको चाल बढ्नु, भोक तथा निन्द्रा नलाग
Sapana Sanjal : अस्वस्थ जीवनशैलीले मिर्गौला रोग लाग्ने भएकाले स्वस्थ जीवनचर्या बिताउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वाग्मती सफाइ महाअभियान र हामी साथ छौँ अभियानले बिहीबार बेलुकी जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मृगौला रोग केन्द्रका प्रमुख प्रा डा ऋषिकुमार काफ्लेले ९० प्रतिशत मानिस मिर्गौला बिग्रिएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको बताउनुभयो । केन्द्रमा हाल दैनिक २५० मिर्गौला रोगीको डाइलासिस हुने गरेको छ । यसैगरी ५० जनाको मिर्गौला परीक्षण हुन्छ । अमेरिकाको ‘स्ट्याण्डर्ड’ खानाले धेरै मानिस बिरामी हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले खानामा साग सब्जीसहितको स्वस्थ चीजबीज उपभोग गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा हाल तीन लाख मानिस मिर्गौला बिगारेर हिँड्ने गरको र तीन हजारको मिर्गौला फेल भएको केन्द्रले जनाएको छ । मिर्गौला रोगबाट बच्न शरीरमा पानीको व्यवस्थापन, उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई निय
Sapana Sanjal : काठमाडौं । मधुमेह भएका मानिसलाई सामान्य जीवन जिउनका लागि के खाने के नखाने भन्ने विषयमा धेरैथरी परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । रगतमा चिनीको स्तर कम गर्ने खानेकुरा मात्र खानुपर्ने हुन्छ । आँपको पातले चिनीको मात्रा घटाएर मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सहायता गर्छ । आँपको पातमा पेक्टिन, भिटामिन सी र फाइबर हुन्छ । पातको म्यांगिफरिनमा एन्जाइम अल्फा ग्लुकोसिडेज निकाल्ने क्षमता हुन्छ र यसले आन्द्रामा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम घटाउन सहायता गर्छ । यसबाछ रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रणमा रहन्छ । ग्लुकोजको इन्सुलिन उत्पादन र वितरणलाई थप राम्रो बनाउन यो प्रभावकारी हुन्छ । यसले चिनीको मात्रालाई स्थिर गर्न पनि सहायता गर्छ । आँपको पातले मधुमेह र कोलेस्ट्रोल दुवैलाई नियन्त्रणमा राख्छ । शरीरको खराब कोलेस्ट्रोल स्तरलाई यसले घटाइदिन्छ । बारम्बार पिसाब लाग्ने, तौल घट्ने, धमिलो देखिने जस्ता मधुमेहका
Sapana Sanjal : कसैले मन नपराउने मुलाकाे जुसकाे सबैलाई अचम्मित पार्ने गुणहरु, जुन कसैलाई थाहा नहुनसक्छ ! सजिलै, सस्तो, । जहाँ पनि, पकाएर खाए भो, काँचो खाए पनि हुने,सलादको रुपमा पनि खान सकिने, तरकारीको रुपमा खान सकिने रअचारको रुपमा खान सकिने बहुउपयोगी र गुणकारी खानेकुरा मुला नै हाे । मुलालाई त्यसै खाए पनि हुन्छ । साथै यसको रस बनाएर पिउन सकिन्छ । मुलाको रस पिउनु स्वास्थ्यका लागि बढी फाइदाजनक छ किनभने, जुस बनाएर खाँदा मुलामा रहेको पोषक तत्व शरीरमा राम्ररी अवशोषित हुन्छ । मुलाको रसमा जिंक, कपर, फोलेट, क्याल्सियम, पोटोसियम जस्ता पोषक तत्व पाइन्छ । साथै यसमा भिटामिन ए, सी र बि-६ पनि पाइन्छ । मुलाको जुस सेवन गर्दा यी सबै पोषक तत्व शरीरले सहज रुपमा ग्रहण गर्न सक्छ । मुला तथा मुलाको जुस सेवन गर्नुको धेरै फाइदै फाइदा रहेका छन् जुन निम्न प्रकार रहेका छन्:- १) कब्जियतबाट छुटकारा:- यसले पाचन
Sapana Sanjal : पुदिनाको सेबन गर्ने गर्नु भएको छ ? छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला,यस्तो बन्दै छ पुदिना सेवन गर्नेहरु…. एजेन्सी । गाढा हरियो रंगको तुलसी जस्तै स–साना पात हुने पुदिना वा पतिना प्रायः चटनी वा अचारको रुपमा खाने गरिएको वनस्पति हो । यो खानु असाध्यै राम्रो मानिन्छ पुदिना नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशहरूमा प्रायः पाइन्छ । बाह्रै महिना चिसो स्थान ठाउँमा भइरहने प्रायः गर्मीतिर फुल्ने गर्दछ । अचार, तरकारी आदिको रुपमा प्रयोग गरिने पुदिना ताजा एवं सुकाएर दुबै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक भनाइमा पुदिना स्वेद कारक, उष्ण, दीपन, एवं वायु कफनाशक, भोक बढाउने, मलमूत्रजन्य रोग रोकथाम गर्ने आदि गुणले भरिएको हुन्छ । यो खोकी, अजीर्ण लगायत विविध पेटका रोगहरुमा गुणकारी छ । यो सधैं प्रयोग गर्ना ले स्वास्थ लाई राम्रो फाईदा मानिन्छ । विभिन्न रोगमा पुदिनाको प्रयोग : अपच: दिनहुँ खानाको साथ
Sapana Sanjal : अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला ! हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छाैँ किनकी कुनै चिजहरु एक साथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानुहुदैन जुन मिसाएर खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखा पर्ने गर्दछ । आज तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा जानकारी गराउछाैँ जुन सँगै खानु हुँदैनजस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन । यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट गडबड हुन्छ । यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चीजको साथ खान हुँदैन । जस्तै धेरै मानिसहरू दहीसँग माछा खान्छन् तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले तातो बनाउछ । आयुर्वेदका अनुसार कुखुरा र खजूर कहिले पनि सँगै खान हुँदैन, यो पनि हानिकारक हुने गर्छ । अब दूधको बारेमा कुरा गरौं जस्तो तपाईंला
Sapana Sanjal : औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ ! । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ । यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौँ । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् । हामीमध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर । तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने क-डा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ । यिनको खोलमा पनि यस्तो धर्सा हुन्छ । यसरी औषधीमा को-रिएको रातो धर्काको हो – डाक्टरको सुझाव वा प्रेसक्रिप्सनबिना खान नहुने । हालै भा-रतको स्वास्थ्य मन्त
Sapana Sanjal : गाउँघरमा पाइने यो सदाबहार फूल हुन्छ यतिधेरै रोगको औषधि, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् काडमाडौँ । सदाबहार फूल :Catharanthus roseues परिवारमा पर्ने यस फूललाई नेपालीमा सदाबहार फूल स‌‌‍स्कृतमा नित्य कल्याणी वा सदा पुष्प र अ‍ग्रेजीमा Rose Periwinkle or Old maid भनिन्छ। हाम्रो घर आगनमा जताततै पाइने यो वनस्पतिमा क्यान्सर, सुगर र उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सक्ने अचुक औषधिय गुण हुन्छ। आज हामी यसैका बारेमा चर्चा गरेका छौं । सुगर : यो वनस्पतिको सम्पुर्ण बोटमा १५० प्रकारका Alkaloid पाइन्छ । जसको प्रयोगले शरिरमा Hypoglycemic effect गर्ने हुनाले रगतमा भएको चिनीकोमात्रा घटाउन महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ। यसमा रहेका Alkaloid ले Pancreas को Beta Cell लाई शक्तिशालि बनाउने भएकाले Pancreasले उत्पादन गर्ने Harmon Insulin को उत्पादन र वितरण सन्तुलित मात्रामा हुने गर्दछ । यसकालागी बिरामीले यो वनस्प
Sapana Sanjal : भुलेर पनि नफाल्नुहाेस् फा-टेको दुधको पानी, प्रयाेग गर्न जाने यस्ता रोगहरुलाई निर्मुल पार्छ । धेरैजसाे गर्मि मौसममा दुध फाट्ने गर्दछ जसको कारणले मानिसहरु फा-टेको दुधलाई फ्याक्ने गर्दछन् तर तपाईलाई थाहा छैन होला फा-टेको दुधमा प्रोटीनको मात्रा सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । जुन प्राेटीनले श-रीरको इम्यूनटी सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने काममा मद्दत पु-याउने गर्दछ । यसले मानिसको श-रीर स्वस्थ र निरो-गी राख्ने गर्दछ । डाक्टरका अनुसार फाटेको दुधको पानी सेवन गर्नाले हार्टस्ट्रोक को ख-तरा समेत कम हुने गर्दछ । ￼￼ फाटेको दुधको पानीले श-रीरको मां-सपेशीलाई मजबुत बनाउन मदत गर्दछ । यसले मां-सपेशीलाई कुनै नोक्सान पु-र्याउँदैन तथा र-गत सञ्चालन पनि सही तरिकाले हुने गर्दछ । यसले मानिसको कहिलेकाँही खुट्टा म-ड्किने, नशा च्याप्पिने स-मस्या बाट पनि निजात मिल्दछ । फाटेको दुधको पानी क-पालमा लगाउनाले क
Sapana Sanjal : INFONPL कागती सेवन गर्नुका बेफाइदा पनि छन्, यस्ता अवस्थामा त भुलेर पनि खानु हुदैन ! कागती सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिनुका साथै सौन्दर्यमा पनि यसको उपयोगिता उत्तिकै छ । पानीमा कागतीको रस निचोरेर पिउनाले शरीरलाई भिटामिन सी, पोटासियम र फाइबर मिल्छ । तर यसको अत्यधिक सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पनि पर्ने गर्दछ । कागतीमा पाइने सिट्रस ए-सिडले दाँतलाई धेरै नै हानी पु-याउन सक्छ । यदि तपाईं धेरै मात्रामा कागतीको सेवन गर्नुहुन्छ भने दाँत कुँडिने वा झन्झनाहट हुने समस्या आउन सक्छ त्यसबाहेक यस्ता छन् कागतिका बेफाइदाहरु:- १) माइग्रेन र टाउको दुख्ने:- कागती धेरै सेवन गर्नाले लगातार टाउको दुख्ने र माइग्रेनको समस्या पनि हुन सक्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा एमिनो एसिड हुन्छ जसले हाम्रो दिमागमा रक्तप्रवाहलाई अचानक तेज बनाइदिन्छ । यसै कारण धेरै टाउको दुख्ने र माइग्रे